Ny Semalt Expert no manasongadina ireo karazana Google Analytics Tokony ho fantatry ny SEO Champ
Tsy isalasalana fa ny Google Analytics dia iray amin'ireo fitaovana manan-danja indrindra sy manan-danja rehefa mahafantatra ny mpihaino sy ny tsirony. Ity fitaovana ity dia ahafahanao mandady lalindalina kokoa amin'ny karazana lahatsoratra izay tianao hamakiana, ny sehatra izay azon'izy ireo kokoa, ary ny lalana mitarika azy ireo hividy ny vokatrao sy ny serivisy. Samy mampiasa ny Google Analytics ireo orinasam-pandraharahana madinika sy madinika ary manararaotra ireo endri-tsainy, manitsy ny angon-drakitra ho an'ny tranokalany ary manomana tetik'ady ara-barotra mahomby.
Roa taona lasa izay, orinasa an-jatony no nampiasa ny Google Analytics ho ampahany amin'ny fanangonana tahirin-kevitra ary tetik'ady ara-barotra dizitaly . Ny orinasa rehetra amin'ny habaka rehetra dia mampiasa fitaovana web analytics , ary ny ankamaroan'izy ireo dia aleon'ny Google Analytics. Ny mpifaninana amin'ny Google Analytics dia Adobe, Webtrends, ary maro hafa - e-farmacy ελληνικο. Mety tsy ho vitan'ny iray amin'izy ireo ny hahazo fahombiazana amin'ny Google Analytics.
Ny sasany amin'ireo toetra tena tsara amin'ny Google Analytics dia nodinihan'i Nik Chaykovskiy, lehiben'ny Success Manager Manager Semalt.
Rehefa mandinika ny fomba fitantanana ny tranonkalanao sy ny pejiny samihafa ianao dia ny teboka avoakanao izay tsy maintsy ekena. Plus, tokony hanamarina ny isan'ireo pejin-tranonao, ny kalitaon'ny fifamoivoizanao sy ny adiresy IP an'ny mpampiasa anao. Ho an'ity, tokony tsindrio ny sasin-tenan'ny toetoetrany ary alaharo ny olana tsirairay avy. Andramo ny fomba tsara indrindra handaminana ny pejy amin'ny taham-pitenenana, saingy tsy hametraka tanteraka ny tranonkalanao izany mba hahazoana fiara avo lenta. Raha tokony ho izany dia tokony handinika ny pejy amin'ny pejy ianao ary hiezaka ny hampihenana ny taham-pihetseham-pandrefesanao amin'ny ankapobeny. Io endri-javatra io dia tsy hita ao amin'ny Google Analytics ary afaka manome anao tombontsoa maro.
Azo antoka ny filazana fa ny tranonkala rehetra dia manana barazy fikarohana ho an'ireo mpampiasa mba hamehezana ny zavatra tadiaviny. Ny bara fitadiavana dia mamafa ny fizotry ny fikarohana amin'ny lafiny iray, mamonjy fotoana maro amin'ny mpampiasa anao. Io endri-javatra io dia natao ao amin'ny Google Analytics, ary azonao atao ny mikaroka ny bara ao amin'ny sehatry ny Site Search. Amin'ny alalan'ity fitaovana ity no ahitanao ny karazana vokatra sy serivisy izay mety tsara ho an'ny mpihaino anao sy ny fomba ahafahanao mivezivezy mora foana ny tranokalanao.
Lahatsoratry ny Remarketing
Ireo lisitry ny remarketing dia sarobidy ho an'ny tanjon'ny marketing. Mamela anao hahazo mpanjifa marobe izy ireo ary hampiova ny mpitsidika ho an'ny varotra. Manangona angona momba ny mpitsidika anao ry zareo, manintona azy ireo mankany amin'ny tranokalanao sy ny vokatrao. Ity endri-javatra lehibe ity dia hita ao amin'ny Google Analytics ary fomba tsara indrindra ahafahana manome ny ankamaroan'ny mpanatrika anao, raha tsy mila mampiasa vola amin'ny paikady momba ny varotra sy dokam-barotra amin'ny media sosialy ianao. Raha te hanitsy ny sehatra ianao dia tokony handeha any amin'ny sehatry ny Admin ao amin'ny Google Analytics ary tsindrio amin'ny "Remarketing" eo ambanin'ny tsanganana mitondra ny lohateny hoe Property. Rehefa vitanao io safidy io, dia azonao atao ny mamorona bebe kokoa ny mpihaino mifanaraka amin'ny zavatra takinao. Azonao atao koa ny manampy azy ireo amin'ny fanentanana dokam-barinao amin'ny AdWords. Ity dia singa tena tsara amin'ny Google Analytics, manome valiny tsara ho anao.